Hteik Khaung Tin
ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးဘုံသူတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်ကြောင်းဖြစ်သော သီလ ဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်၊ ၀ိမုတ္တိဂုဏ်၊ ၀ိမုတ္တိညဏ ဒဿနဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံတော် မူထပေသော သစ္စာ ဥေယျ ဓမ္မအပုံ အလုံးစုံကို အကုန်မကျန် မြတ်ရွှေညဏ်ဖြင့် အမှန် ထိုးထွင်း အလင်းထင်ပေါ် သိမြင်တော်မူထပေသော ဣဿရိယ ဓမ္မယသ သီရိကာမပ ယတ္တ တည်းဟူသော ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူပေထသော မြတ်စွာဘုရားအား ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ ရှိခိုး ခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေသတည်းဘုရား။
Homage to the exalted,
the worthy, the fully
enlightened, the Buddha supreme.
Posted by BarNyar at 4:49 AM No comments:
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ဗာရာဏသိယံ ၀ိဟရတိ ဣသိပတနေ မိဂဒါယေ
တတြခေါ ဘဂ၀ါ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယေ ဘိက္ခူ အာမန္တေသိ "ဘိက္ခဝေါ"တိ
"ဘဒ္ဒန္တေ" တိ တေ ဘိက္ခူ ဘဂ၀တော ပစ္စေဿာသုံ
ဘဂ၀ါ ဧတ ဒဝေါစ
တစ်ပါးသောအခါ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီနေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး(၌) ရှေးခါခေတ်ဟောင်း ရသေ့သူမြတ် အပေါင်းတို့၏ သက်ဆင်းရာဖြစ်သော၊ သားသမင် အပေါင်းတို့ကို ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။
ထိုသို့ သီတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောဏ္ဍညအမှူး ငါးဦး အစုအဝေးရှိကုန်သော ရဟန်း တို့ကို "အို ရဟန်းတို့"ဟူ၍ ခေါ်တော်မူ၏။
ထိုပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် "အရှင်မြတ်ဘုရား" ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ထားကြကုန်၏။
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤအနတ္တလက္ခဏသုတ်စကားကို မိန့်မြွက် ဟောကြားတော်မူလေသတည်း။
At one time, The Bhagavā was dwelling in Benares, at the deer park, Isipatana.
There the Bhagavā addressed the group of five Bhikkhus,
“ O! Bhikkhus! ”
And the Bhikkhus answered, “Bhaddante”.1
Then the Bhagava spoke thus:-
1. Bhaddante =ဘဒ္ဒန္တေ အရှင်မြတ်ဘုရား
“Sir”, “Reverened Sir”, “Venerable Sir”, A contracted form of Bhaddante is Bhante.
Posted by BarNyar at 4:38 AM No comments:
ရူပံ ၁ ဘိက္ခဝေ အနတ္တာ
ရူပဉ္စ ဟိဒံ ဘိက္ခဝေ အတ္တာ အဘ၀ိဿ နယိဒံ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ
လဗ္ဘေထ စ ရူပေ "ဧ၀ံ မေ ရူပံ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ရူပံ မာ အဟောသီ" တိ
ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခဝေ ရူပံ အနတ္တာ တသ္မာ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ
န စ လဗ္ဘတိ ရူပေ "ဧ၀ံ မေ ရူပံ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ရူပံ မာ အဟောသီ" တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ ရုပ်တရားအပေါင်းသည် အစိုးမရ အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ အမှန်ပင်တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ရုပ်တရားအပေါင်းသည် ဧကန်စင်စစ်အလိုသို့ လိုက်သော အတ္တ သဘောရှိသည် ဖြစ်ပါမူကား ဤရုပ်တရားသည် အလိုသို့ လိုက်ပါ၍ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ မဖြစ်လေရာ။
"ငါ၏ရုပ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏ရုပ်သည် ဤသို့မဖြစ်စေလင့်"
ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း ရုပ်တရား၌ အခွင့်ရနိုင်လေရာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် အကြင်သို့သော အကြောင်းကြောင့်လျှင် ရုပ်တရားသည် အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ သဘောရှိချေ၏။ ထို့ကြောင့် ရုပ်တရားသည် အလိုသို့ မလိုက်ပါဘဲ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဖောက်ပြန်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။
ဤသို့ မိမိတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်း ရုပ်တရား၌ အခွင့်မရနိုင်။
“Matter, Bhikkhus, is not the self ”.
If matter, Bhikkhus, were the self, then matter would not tend to sickness.
And one could say of matter, “Thus let matter be thus for me, let matter not be thus for me.”
“But, Bhikkhus, in as much as matter is not the self, that is why matter tends to sickness.
And one cannot say of matter, “Thus let matter be thus for me, let matter not be thus for me.”
၁။ ရူပ = ရုပ်၊ သရုပ်သဘော၊ အဆင်း၊ သဏ္ဌာန
Rǔpa - Matter, principle of form, figure, shape, image, object of the eye, appearance.
Posted by BarNyar at 4:30 AM No comments:
ဝေဒနာ ၁ အနတ္တာ
ဝေဒနာစ ဟိဒံ ဘိက္ခဝေ အတ္တာ အဘ၀ိဿ နယိဒံ ဝေဒနာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ
လဗ္ဘေထ စ ဝေဒနာယ "ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ မာ အဟောသီ"တိ
ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခဝေ ဝေဒနာ အနတ္တာ တသ္မာ ဝေဒနာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ
န စ လဗ္ဘတိ ဝေဒနာယ "ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ဝေဒနာ မာ အဟောသီ "တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ ခံစားမှုဝေဒနာအပေါင်းသည် အစိုးမရ အလိုသို့ မလိုက်သော အနတ္တ အမှန်ပင်တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ခံစားမှုဝေဒနာအပေါင်းသည် ဧကန်စင်စစ် အလိုသို့လိုက်သော အတ္တသဘောရှိသည် ဖြစ်ပါမူကား ဤဝေဒနာသည် အလိုသို့လိုက်ပါ၍ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ မဖြစ်လေရာ။
"ငါ၏ဝေဒနာသည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏ဝေဒနာသည် ဤသို့မဖြစ်စေလင့်"
ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း ဝေဒနာတရား၌ အခွင့်ရနိုင်လေရာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် အကြင်သို့သော အကြောင်းကြောင့်လျှင် ဝေဒနာတရားသည် အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ သဘောရှိချေ၏။ ထို့ကြောင့် ဝေဒနာတရားသည် အလိုသို့ မလိုက်ပါဘဲ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။
"ငါ၏ဝေဒနာသည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏ဝေဒနာသည် ဤသို့ မဖြစ်စေလင့်"
ဤသို့ မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်း ဝေဒနာတရား၌ အခွင့်မရနိုင်။
Feeling, Bhikkhus, is not the self.
If feeling, Bhikkhus, were the self, then feeling would not tend to sickness.
And one could say of feeling, “Thus let feeling be thus for me.”
“But, Bhikkhus, in as much as feeling is not the self, that is why feeling tends to sickness.”
And one cannot say of feeling, “Thus let feeling be thus for me, let feeling not be thus for me.”
၁။ ဝေဒနာ = ခံစားခြင်း
Vedanā - Feeling, sensation, pain, suffering
Posted by BarNyar at 4:22 AM No comments:
သညာ ၁ အနတ္တာ
သညာ စ ဟိဒံ ဘိက္ခဝေ အတ္တာ အဘ၀ိဿ နယိဒံ သညာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ
လဗ္ဘေထ စ သညာယ"ဧ၀ံ မေ သညာ ဟောတု ဧ၀ံ မေ သညာမာအဟောသီ"တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ မှတ်သားမှု သညာအပေါင်းသည် အစိုးမရ အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တအမှန်ပင်တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ မှတ်သားမှု သညာအပေါင်းသည် ဧကန်စင်စစ် အလိုသို့လိုက်သော အတ္တသဘောရှိသည် ဖြစ်ပါ မူကား ဤသညာသည် အလိုသို့လိုက်ပါ၍ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဖောက်ပြန်ခြင်းငှာ မဖြစ်လေရာ။
"ငါ၏သညာသည် ဤသို့ ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏သညာသည် ဤသို့ မဖြစ်စေလင့်"
ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း သညာတရား၌ အခွင့်ရနိုင်လေရာ၏။
Perception, Bhikkhus, is not the self.
If perception, Bhikkhus, were the self, then perception would not tend to sickness.
And one could say of perception, “Thus let perception be thus for me, let perception not be thus for me.”
၁။ သညာ = မှတ်ခြင်း၊ အာရုံ၏သဘောကို မှတ်ခြင်း
Saňňā - Perception, mark, recognition
ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခဝေ သညာ အနတ္တာ တသ္မာ သညာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ
န စ လဗ္ဘတိ သညာယ " ဧ၀ံ မေ သညာ ဟောတု ဧ၀ံ မေ သညာ မာ အဟောသိ "တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် အကြင်သို့သော အကြောင်းကြောင့်သာလျှင် သညာတရားသည် အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ သဘောရှိချေ၏။ ထို့ကြောင့် သညာတရားသည် အလိုသို့မလိုက်ပါဘဲ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။
"ငါ၏သညာသည် ဤသို့ ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏သညာသည် ဤသို့ မဖြစ်စေလင့်" ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း သညာတရား၌ အခွင့်မရနိုင်။
“But, Bhikkhus, in as much as perception is not the self, that is why perception tends to sickness.”
And one cannot say of perception, “Thus let perception be thus for me, let perception not be thus for me.”
Posted by BarNyar at 4:11 AM No comments:
သင်္ခါရာ ၁ အနတ္တာ
သင်္ခါရာ စ ဟိဒံဘိက္ခဝေ အတ္တာအဘ၀ိဿံသု နယိဒံ သင်္ခါရာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျုံ
လဗ္ဘေထ စ သင်္ခါရေသု "ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ ဟောန္တု ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ မာ အဟေသု" န္တိ
ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခဝေ သင်္ခါရာ အနတ္တာ တသ္မာ သင်္ခါရာ အာဗာဓာယ သံဝတ္တန္တိ န စ လဗ္ဘတိ သင်္ခါရေသု "ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ ဟောန္တု ဧ၀ံ မေ သင်္ခါရာ မာ အဟေသု" န္တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ ပြုပြင်စီရင်မှု သင်္ခါရတရား အပေါင်းတို့သည် အစိုးမရ၊ အလိုသို့ မလိုက်သော အနတ္တအမှန်တို့ ပင်တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ပြုပြင်စီရင်မှု သင်္ခါရ အပေါင်းတို့သည် ဧကန်စင်စစ် အလိုသို့လိုက်သော အတ္တသဘောရှိကုန်သည် ဖြစ်ပါကုန်မူကား ဤသင်္ခါရတို့သည် အလိုသို့ လိုက်ပါ၍ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်ကုန်ရာ။
"ငါ၏ သင်္ခါရတို့သည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေကုန်၊ ငါ၏သင်္ခါရတို့သည် ဤသို့ မဖြစ်စေကုန်လင့်" ဤသို့ မိမိတို့ အလို ဆန္ဒအတိုင်း သင်္ခါရတရားတို့၌ အခွင့်ရနိုင်လေရာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် အကြင်သို့သော အကြောင်းကြောင့်လျှင် သင်္ခါရတရားတို့သည် အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ သဘောရှိချေကုန်၏။ ထို့ကြောင့် သင်္ခါရတရားတို့သည် အလိုသို့မလိုက်ပါဘဲလျက် ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက် ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။
"ငါ၏ သင်္ခါရတို့သည် ဤသို့ ဖြစ်ပလေစေကုန်၊ ငါ၏ သင်္ခါရတို့သည် ဤသို့ မဖြစ်စေကုန်လင့်" ဤသို့ မိမိတို့ အလို ဆန္ဒအတိုင်း သင်္ခါရ တရားတို့၌ အခွင့်မရနိုင်။
Mental formation, Bhikkhus, is not the self.
If mental formation, Bhikkhus, were the self, then mental formation would not tend to sickness.
And one could say of mental formation, “Thus let mental formation be thus for me, let mental formation not be thus for me.”
But, Bhikkhus, in as much as mental formation is not the self, that is why mental formation tends to sickness.
And one cannot say of mental formation, “Thus let mental formation be thus for me, let mental formation not be thus for me.”
၁။ သင်္ခါရ = ပြုပြင်စီရင်တတ်သော အကြောင်းတရား
Sahkhāra - Mental formation, essential condition, mental coefficients.
Posted by BarNyar at 4:06 AM No comments:
၀ိညာဏံ ၁ အနတ္တာ
၀ိညာဏဉ္စ ဟိဒံ ဘိက္ခဝေ အတ္တာ အဘိဝိဿ နယိဒံ ၀ိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တေယျ
လဗ္ဘေထ စ ၀ိညာဏေ "ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ မာ အဟောသီ" တိ
ယသ္မာ စ ခေါ ဘိက္ခဝေ ၀ိညာဏံ အနတ္တာ တသ္မာ ၀ိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝတ္တတိ
န စ လဗ္ဘတိ ၀ိညာဏေ "ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ ဟောတု ဧ၀ံ မေ ၀ိညာဏံ မာ အဟောသီ" တိ
ချစ်သားရဟန်းတို့ သိမှုဝိညာဉ်သည် အစိုးမရ အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ အမှန်ပင် တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ သိမှုဝိညာဉ်အပေါင်းသည် ဧကန်စင်စစ် အလိုသို့လိုက်သော အတ္တ သဘောရှိသည် ဖြစ်ပါမူကား ဤ၀ိညာဉ်သည် အလိုသို့လိုက်ပါ၍ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ မဖြစ်လေရာ။
"ငါ၏၀ိညာဉ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏၀ိညာဉ်သည် ဤသို့ မဖြစ်စေလင့်" ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း ၀ိညာဉ်တရားအပေါင်း၌ အခွင့်ရနိုင်လေရာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် အကြင်သို့သော အကြောင်းကြောင့်သာလျှင် ၀ိညာဉ်တရားသည် အလိုသို့မလိုက်သော အနတ္တ သဘောရှိချေ၏။ ထို့ကြောင့် ၀ိညာဉ်တရားသည် အလိုသို့မလိုက်ပါဘဲ ကျင်နာခံခက် နှောင့်ယှက်ဘောက်ပြန်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။
"ငါ၏ ၀ိညာဉ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပလေစေ၊ ငါ၏၀ိညာဉ်သည် ဤသို့မဖြစ်စေလင့်" ဤသို့ မိမိတို့ အလိုဆန္ဒအတိုင်း ၀ိညာဉ်၌ အခွင့်မရနိုင်။
Consciousness, Bhikkhus, is not the self.
If consciousness, Bhikkhus, were the self, then consciousness would not tend to sickness.
And one could say of consciousness, “Thus, let consciousness be thus for me, let consciousness not be thus for me.
“But, Bhikkhus, in as much as consciousness is not the self, that is why consciousness tends to sickness.”
And one cannot say of consciousnesss, “Thus let consciousness be thus for me, let consciousness not be thus for me.”
၁။ ၀ိညာဏ = အထူးသဖြင့်သိခြင်း၊ အာရုံကိုသိခြင်း၊ ၀ိညာဏ်
Posted by BarNyar at 3:51 AM No comments: